LG Q70: Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta gọọmentị | Gam akporosis
LG's Q nso bụ etiti dị ugbu a na akara Korea. N'afọ a ha ahapụgoro anyị ọtụtụ ụdị n'ime ya, dị ka Q60, nke anyị kwurula banyere izu ole na ole gara aga. Thelọ ọrụ ahụ na-eweta ngwaọrụ ọhụrụ ugbu a na nso nso a, LG Q70. Modeldị ọhụrụ dị n’etiti ya, nke na-abịa na ọtụtụ ndozi.
LG Q70 na-ahapụ anyị na igwefoto ka mma na ike ka ukwuu. Site na ihe anyị nwere ike ịhụ na onye nrụpụta Korea na-achọ ịkwalite etiti a, iji nwee ike ịsọ mpi na mpaghara ahịa a, ebe asọmpi ahụ dị oke. Kedu ihe anyị nwere ike ịtụ anya site na ekwentị a?
Imewe bụ ọwọrọiso mgbanwe maka LG. Ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ na-ahapụ anyị na oghere na ihuenyo na nke a, kama iji ọkwa dị ka ọ dị na mbụ na ngwaọrụ gị. Nhazi oge a, nke na-enye gị ohere iji ihu ọma nke ngwaọrụ a nke ọma. Mgbe n'azụ anyị nwere igwefoto atọ na ihe mmetụta mkpịsị aka.
1 Nkọwa LG Q70
Nkọwa LG Q70
Banyere nkọwa ya, LG Q70 bụ ihe nlere anya na-agbakọta nke ọma ihe etiti dị ugbu a na gam akporo bụ. O nwere ezigbo ike, n'ihi nhazi kacha mma na ese foto bụ otu n'ime ike ya, ebe ụlọ ọrụ chọrọ ịlebara anya pụrụ iche. Yabụ na anyị nwere ike ịtụ anya ekwentị dabara adaba na nke a. Ndị a bụ nkọwa zuru ezu nke ekwentị:
Ihuenyo: 6,4-inch IPS nwere mkpebi FullHD + (2340 x 1080 pikselụ)
Nchekwa dị n'ime: 64 GB (Gbasaa na kaadi microSD)
Igwefoto na-aga: 32 MP nwere oghere f / 1.8 + 13 MP n'obosara obosara + 5 MP omimi ihe omimi
Batrị: 4.000 mAh na Qualcomm Quickcharge 3.0 ngwa ngwa
Njikọta: 4G / LTE, SIM abụọ, Bluetooth 5.0, WiFi 802.11 a / c, GPS, GLONASS
Ndị ọzọ: Ntanetị mkpịsị aka azụ, NFC, Button maka Google Assistant, FM Radio
Akụkụ: 162,1 x 76,8 x 8,3 mm
Arọ: gram 198
Otu n'ime akụkụ kachasị mkpa bụ ojiji nke Snapdragon 675 dị ka ihe nhazi. Ọ bụ mmelite maka LG Q70 a, nke na-ahụ n'ụzọ a ka esi esiwanye ike ya. Ke adianade do, n'ụzọ dị otú a ọ na-enweta arụmọrụ ka mma, nke dị mkpa iji bulie ụdị Korea a. Ọ na-ebupụta otu nchikota RAM na nchekwa. Ọ bụ ezie na ọ nwere batrị mAh 4.000, nke ga-enye anyị nnwere onwe dị mma.
Igwefoto bụ otu n'ime ihe ngosi na LG Q70. A na-eji ihe mmetụta okpukpu atọ, ya na onye isi 32 MP. Ha bụ igwefoto dị mma, nke doro anya na-ekwe nkwa ịrụ ọrụ nke ọma maka onye ọrụ, jikwa ya na ọgụgụ isi. Ihe mkpịsị aka mkpịsị aka dị na azụ ekwentị. Na mgbakwunye, dị ka ọ dị na mbụ na ekwentị ụlọ ọrụ, ọ nwere bọtịnụ iji rụọ ọrụ Google Assistant.
Maka ugbu a Naanị LG Q70 igba egbe na South Korea ekwenyela. Ọ bụ ezie na a ga-arụ ọrụ ya n'ime izu ole na ole na ahịa ndị ọzọ dịka Spain. Ngwaọrụ dị n'akụkụ a na-ebutekarị na mba anyị, dika odi na Q60 izu ole na ole gara aga. Yabụ na anyị nwere olile anya ịnweta nkwenye n'aka ụlọ ọrụ n'oge na-adịghị anya.
Na mmalite ya na South Korea, a ga-akwụ ụgwọ ya na 548.900 meriri, nke mgbanwe bụ banyere 410 euro ọzọ ma ọ bụ obere. Ọ gaghị abụ ihe ijuanya maka ọnụahịa ya ka ọ dị elu mgbe a malitere ya na Spain, ihe ga-eme ka ezigbo ahịa sie ike na nke a. Ọ bụ ezie na anyị nwere olile anya na ọ bụ ikpe na - abụghị okwu ma ọ dị ọnụ ala karịa. Ọ na-abata n'otu nhazi nke RAM na nchekwa na ụlọ ahịa. Banyere agba, LG Q70 a malitere na agba a n'etiti isi awọ na oji nke anyị hụworo. O yiri ka ọ ga-abụ naanị nhọrọ dị na etiti a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG Q70: Uzo ohuru ohuru bu akara